Guddoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Nugaal Saciid Xasan oo daljir u waramay (dhegayso) – Radio Daljir
Guddoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Nugaal Saciid Xasan oo daljir u waramay (dhegayso)
Noofember 24, 2018 3:32 g 0
Garoonka kubbadda Cagta Mirre Awaare Jaamac waxaa bilihii ugu dambeyay ka socday Tartan kubbadda Cagta ah oo loo qabtay kooxo heerka labaad ah .
Kooxaha ka qayb-galay tartankaan waxaa ay tiradoodu dhan tahay 24 kooxood waxaan ay ka kooban yihiin 600 oo ciyaartooy.
Koobka kooxaha heerka labaad ayaa hadda soo gaaray wareega 8 dhammaadka iyadoo shalay ay ciyaareen kooxihii ugu damabeeyay ee u soo gud bay wareegaasi .
Haddaba Guddoomiyaha Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Gobolka Nugaal Saciid Xasan Cabdi ayaa ka waraystay halka haatan wax u marayaan .
Shacabka Puntland oo siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka Federaalka & Dowlad gobaleedyada (dhegayso)
Muuse Biixi:“ Socdaalkayaga Sool Waa Nabad iyo Midnimo” (dhegayso)